WITHIN 5.3.736 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.3.736 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖေရး WITHIN
WITHIN ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး VR ဖန်တီးသူ-အားလုံးတစ်ခုတည်း app ထဲမှာကနေအကောင်းဆုံး VR အကြောင်းအရာရှာဖွေပါ။ အရင်ကထက်သတင်းအထဲမှာနောက်ထပ်သင်တာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မှစင်ကြယ်သောစိတ်ကူးစိတ်သန်း၏ကမ္ဘာထဲမှာ set ပုံပြင်များဆုတ်ထားတာကနေ, အတွင်းပရီမီယံ, ဗီဒီယိုအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအတွက်ဇာတ်လမ်းကို-based စွဲငြိဖွယ်ရာ၏အကြောင်းအရာအတူတကွတတ်၏။ အတွင်း Download ယနေ့ storytelling ၏အနာဂတ်ခံစားရသည်။
အဆိုပါ hit ပြပွဲရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်များ၏သမိုင်းတစ် key ကိုယခုအချိန်တွင်အထဲမှာသင်တို့ကိုဆောင်တတ်၏ရသောမစ္စတာစက်ရုပ် Virtual Reality လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ, တူသောရေပန်းစားအကြောင်းအရာ -Watch
Google က Cardboard နှင့် Google Cardboard-လက်မှတ်ကြည့်ရှုနှင့်အတူ -Works
စောင့်ကြည့်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီဗီဒီယိုများဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကြည့်ရှုသူသို့သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုထည့်သွင်းဖြစ်လျှင်, အတွင်း app ကို download -Just
-Also တစ်ဦးကြည့်ရှုသူမရှိဘဲ, သင့်ဖုန်းပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တယ် - သင်ကမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါရန်သင့်အားလှည့်ပတ်ရွှေ့အဖြစ်သင့်ရဲ့ device 360 ​​° VR အတွေ့အကြုံကိုသို့ "မှော်ပြတင်းပေါက်" ဖြစ်လာ
လက်တွေ့ 3D Spatial VR အသံနားကြပ်သို့မဟုတ် earbuds သုံးစွဲဖို့သေချာ -Be
Apple က The New York Times, NBC, ဒုမီဒီယာ, ကုလသမဂ္ဂ, Annapurna Pictures, U2, မူဆယ်နှင့် Squarepusher တူသောဂီတလုပ်ရပ်များ, ပေါင်းပိုပြီးအပါအဝင်မိတ်ဖက် မှစ. , ဆန်းသစ်ဖျော်ဖြေမှုများနှင့်သိကောင်းစရာများအကြောင်းအရာ -Experience
WITHIN အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
WITHIN အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
WITHIN အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
WITHIN အား အခ်က္ျပပါ
appsvr စတိုး 466 239.96k
WITHIN ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း WITHIN အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.3.736
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://with.in/privacy/
App Name: WITHIN
File Size: 101.98MB
Release date: 2019-08-13 04:35:01
လက်မှတ် SHA1: EE:0F:4E:46:E0:A8:BD:DC:9F:A3:2E:B0:15:0D:E0:DF:D1:38:4E:6A
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Jens Zalzala
အဖွဲ့အစည်း (O): Shaking Earth Digital
နယ်မြေ (L): West Liberty
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): IA
WITHIN APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ